This entry was posted on Wednesday, September 10, 2008 and is filed under အမှတ်တရများ . You can leavearesponse and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .
အင်း ခုမှစဉ်းစားမိတယ် ဂျွန်စောနဲ့ တူတယ်နော်.. :D :P :) ကျန်စစ်လောက်တော့ မခန့်ပါဘူးပေါ့နော်.. :P :D :)
သူ့ ရုပ်ကြီးကိုများ ဂျွန်စော တဲ့ အဟု အဟု ကယ်တော်မူကြပါအုံးးးးး) အစားအစာနဲ့အလိုချင်ဆုံးလက်ဆောင်က ကြောက်စရာကြီး လောဘတွေ သိပ်မကြီးနဲ့နောင်ညာရေ့ သေရင် ကိူုယ့်နောက်ဘာမှမပါဘူး အပုပ်ကောင်ကြီးတဲ ဟီးး ကိုကျန့်ကိုအချစ်ဆုံးဆိုတော့ သူ့ မှာ ညီမလေးရှိလိူု့ လားမသိ မောင်အညာသား ရိုးသားတာ ဘာမှမရှိ ...............။
နောင်တော်ရေ ခုမှ ဘလော့ဘက်ပြန်လှည့်ဖြစ်လို့ကွာ။
အလိုချင်ဆုံးဆုတွေကို ထီပေါက်တဲ့နေ့လုပ်ပေးမယ် :D
လိုက်ဖက်မယ့် အရောင်ဆိုတာ ဘယ်လိုအရောင်လေးပါလိမ့်နော် :P
မင်းရဲ့ အခင်ဆုံးသူငယ်ချင်း ဖြစ်ခွင့်ရတာ သိပ်ဝမ်းသာတယ်ကွာ။